Salvador: Iadian-kevitra Hatrany ny hoe Iza ao an-Tanàna no Mpifindra Monina Voalohany · Global Voices teny Malagasy
Salvador: Iadian-kevitra Hatrany ny hoe Iza ao an-Tanàna no Mpifindra Monina Voalohany
Voadika ny 13 Mey 2015 7:46 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , English
Pasipaoron'i Sigfredo Chávez. Mankalaza azy noho izy mpifindra-monina voalohany nankany Etazonia ny Intipucá . Sary: Ruxandra Guidi. Nahazoan-dalana avy amin'ny PRI
Tanàna kely ao ao atsimo-atsinanan'i El Salvador i Intipucà, miorina akaiky ny tora-pasika malaza amin'ireo mpikorisa an-dranomasina (surfers). Saingy tsy misy idiran'ny fizahantany ny zavatra fantatry ny ankamaroan'ny avy any ivelan'ny tanàna momba ity toerana ity. Malaza amin'ny olona nandao azy i Intipucà.
Eo amin'ny 5.000 eo ankehitriny ireo avy eo Intipucá no monina ao sy manodidina an'i Washington, DC. Nilaza tamiko ny fijeriny mikasika ny antony nandaozan'ny vahoaka ny toerana hamonjy an'i Etazonia ny ben'ny tanàna, Enrique Méndez.
Izany dia noho ny ady mitam-piadiana teto El Salvador,” hoy izy, “ary i Sigfredo Chávez no voalohany lasa any.”
Tsangambaton'i Sigfredo Chávez ao amin'ny kianjan'ny mpifindra monina ao Intipucá. Sary: Ruxandra Guidi. Nahazoan-dalana avy amin'ny PRI
Tsy dia marina loatra ny fitantaran'ny ben'ny tanàna. Nanomboka tamin'ny faramparan'ny taona 1960 ny fifindra-monina, farafahakeliny 15 taona talohan'ny nidiran'i El Salvador tao anaty ady an-trano. Ary raha nilaza izy fa i Sigfredo Chávez no mpifindra monina voalohany tao an-tanàna, tsy niombo-kevitra taminy ny olona maromaro tao amin'ny biraony.
Fantatra fa misy ilany anganongano sy honohono ary misy ilany marina araka ny zava-misy ny tantaran'ity mpifindra monina voalohany niala tao Intipucà ity.
Oscar Romero, zana-drahalahin'i Sigfredo Chávez no olona iray milaza fa mahalala tsara ny tena tantara. Indray andro vao maraina, alohan'ny andehanany hiasa, mihaona amiko eo anoloan'ny tsangambato natsangana ho fanomezam-boninahitra ny dadatoany ao amin'ny kianja lehiben'i Intipucá i Romero.
Mitraka mjery ny sarivongana tanimangan'ilay lehilahy miaraka amin'ny kitapo babena eo an-tsorony, feno rehareha tanteraka i Romero.
“Ity no tsangambato voalohany hoan'ireo mpifindra monina eto amin'izao tontolo izao!”, hoy izy. “Tsy misy toeran-kafa nisy olona nanan-kevitra hidera ny mpifindra moniny voalohany. Ka ny dadatoako izao no famantarana iraisam-pirenena.
Chávez no azo antoka fa anisan'olona mahery fon'ny vahoaka tao Intipucá. “Salama ara-batana sy mpanao fanatanjahantena izy,” hoy i Romero nanondro ny sarivongana. “Hitanao ny toetoeny eo amin'ny tarehiny: Matoky, vonona. Mitodika any avaratra izy, any amin'ny misy ny seranam-piaramanidina. “
Avy amin'ny fianakaviana tompon-tany i Chávez izay niatrika fotoan-tsarotra taorian'ny fanavaozana ny fizakan-tany tao El Salvador. Araka ny tantara, nanosika azy hoany Etazonia ny reniny, vehivavy tia mivoatra mba hanatsaràna ny harenan'ny fianakaviana. Nilaza i Romero fa nandao ny tanàna niaraka tamin'ny visa ho an'ny mpizaha-tany ny dadatoany tamin'ny 1968, tsy niampita ny sisintany Etazonia-Meksika tamin'ny fomba tsy ara-dalàna na nandeha an-tongotra tahaka ny maro taoriany ny mpifindra monina voalohany avy ao Intipucá.
Nankany Washington, DC izy, ary nanomboka re ny tantarany volana vitsivitsy tatỳ aoriana. Afaka manana fiainana tsara amin'ny fanasana lovia sy fanadiovana trano ianao, hoy izy.
Afisy ao amin'ny foibe ara-kolontsain'i Intipucá mankalaza ny tsingerintaona faha-45 nandaozan'ny mpifindra monina voalohany ny tanàna hamonjy an'i Etazonia. Sary: Ruxandra Guidi. Nahazoan-dalana avy amin'ny PRI
Maro ireo mponina tao an-toerana nanomboka nanara-dia azy, ka tao anatin'ny taona vitsivitsy monja, nanjary toerana fitobian'ireo teratany Intipucà i Washington. Nilaza ny olona sasany tao an-tanàna fa olona teo amin'ny 300 isan'andro teo no namonjy an'i Etazonia, na dia tafahoatra aza izany isa izany.
Tsy olana izay isa, nanomboka nitobaka tao Intipucà ny fandefasam-bola avy ao Washington. Natao hanamboarana sekoly, kianja sy foibe ara-kolontsaina izany, ka midika fireharehana mivantana eto ny fisian'ny fifandraisana amin'ny mpifindra-monina voalohany.
“Tahaka ny mari-pankasitrahana izany. Toy ny milaza hoe: mahazo loka aho satria ny fianakaviako no voalohany nifindra monina, “hoy i Jaqueline Portillo, talen'ny foibe ara-kolontsain'i Intipucá sady mpitahiry ny ankamaroan'ireo asakanto, tahirin-kevitra sy sary an'ireo fianakaviana ao an-toerana. Ao anatin'ny vata mihidy ao aminy no misy ny pasipaoron'i Chávez taloha, taratasy momba ny fisaraham-panambadiany sy ny sarim-pianakaviana.
Noho izany tsy mahagaga raha tsy ny fianakavian'i Chávez irery ihany no milaza fa voalohan-daharana.
Manizingizina i Alfredito Arias fa izy no voalohany nandao ny tanàna tamin'ny taona 1967, saingy tsy manaiky anaovana antsafa izy. Nilaza izy fa manao izay ampahafantatra ny momba azy tamin'ireo vahiny.
“Nitahiry antontan-taratasy bebe kokoa noho i Alfredito Arias ny fianakaviana Chàvez,” hoy i Portillo, “ka mana-danja bebe kokoa ho mpifindra-monina voalohany ny tantaran'i Chávez.”
Foiben'ny tanànan'i Intipucá. Nitobaka tao ny fandefasana fanampiana ara-bola, saingy niala tao ny vahoaka. Sary: Ruxandra Guidi. Nahazoan-dalana avy amin'ny PRI
Ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Ruxandra Guidi ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 4 May 2015 ary navoaka teto indray noho ny fifanekena fifampizarana votoaty.
Namoy ny ainy tamin'ny taona 2006 i Chávez, ka tsy afaka nilaza ny tantarany manokana. Saingy mbola velona ao Etazonia ny vadiny mananon-tena, Elba Salinas. Nilaza ny zana-drahalahiny, Hugo Salinas fa izy no tokony heverina fa mpifindra-monina voalohany – tsy namonjy an'i Etazonia i Chávez raha tsy noho ny vadiny.
“Nandao niaraka tamin'i Elba izy!” hoy i Salinas mamerimberina. “Nilaza izany tamiko ihany koa i Elba!”
Manangona ny antsipirahan'ny tantaran'ny nenitoany sy ireo mpifindra-monina hafa marobe i Salinas. Mikasa hanao hetsika lehibe hoan'ny faha-50 taonan'ny fifindra-monina ao Intipucà, izay hoavy amin'ny taona 2018 izy sy Jaqueline Portillo.
“Te-hanangana endrika tsara hoan'ny tanànako aho, satria tsy nisy olona nanangona ireo tantara manokana,” hoy i Salinas. “Tantara tahaka ny an'Atoa Martin Lazo, izay te-hampindrana fitafiana ho anao ho entina mandeha fiaramanidina satria tsy maintsy miakanjo tsara ianao tamin'izany fotoana izany. Na koa ny tantaran'ny ‘Travel Today, Pay Later (Mandeha Anio, Aloavy Amin'ny Manaraka),’ izay manome famindramam-bola ho anao ahafahanao mandoa visa Amerikana. “
Manahy i Salinas fa mety ho adinon'ny taranaka any aoriana ireo tantaran'ny fifindramonina sy i Intipucà. Ankehitriny, tombanana eo amin'ny antsasaky ny mponina tao an-tanàna no monina ao Etazonia. Mila ho foana ny eny an-dalambe. Na ny tranon'i Sigredo Chavez aza tsy misy olona intsony, tsangambato iray hafa ao amin'ny tanàna izay mankalaza ny fifindramoniny manokana.
Novokarina niaraka tamin'i Round Earth Media ny lahatsoratr'i Ruxandra